Protest Video | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
November 26, 2007, 2:41 am
ကျွန်မတို့ စင်္ကာရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်အစုံကို SG Human Rights က သေသေချာချာ ရိုက်ကူးပြီး တင်ဆက်ပေးထားတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း ကိုယ်တွေလုပ်ခဲ့တာ ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး ရင်ထဲမှာ တော်တော်ခံစားမိတယ် . ။ ဆန္ဒပြပွဲမှတ်တမ်းကို ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Peaceful Protest For Asean Summit
Hi Nyi Ma,
That isagreat movement.
I appreciate and respect your great job.
Comment by myo November 26, 2007 @ 3:31 am
i like the peaceful activies.
i amachinese born in burma.
i wish more and more myanmar people take in acti.
Thanks from U.S.A
Comment by aung November 26, 2007 @ 9:47 am
မလင်းလက်ကြယ်စင် – ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရတာ စိတ်ဓါတ်လည်း တက်ကြွတယ်။ တဘက်ကလည်း စိတ်မကောင်းဘူး။ ဘာလို့ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွလဲ၊ ဘာလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရလဲဆိုတာ မလင်းလက်ကြယ်စင်တို့ ခန့်မှန်းမိမှာပါ။ ဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခု ကျွန်တော်ရေးထားသေးတယ်တယ်။ အချိန်အားရင်တော့ လာဖတ်ပါဦးဗျာ။ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ စေတနာကို လေးစားလျက်ပါ။
Comment by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် November 26, 2007 @ 12:49 pm
ဘုန်းကြီးကျောင်းကိစ္စကိုလည်း လာဖတ်ဖြစ်သလို အခု ဗီဒီယို မှတ်တမ်းလေးကိုလဲ လာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်နေအောင် တွဲထားတဲ့ လက်တွေ၊ ဆန္ဒပြကြတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ခံစားချက်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေက အဝေးကနေပြီးတော့ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရတဲ့ အကို့ဆီကိုလည်း အဲဒီ ခံစားချက်တွေ စိမ့်ဝင်ကူးစက်လာသလို ခံစားရပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူ ရဲနဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ လူကို ၂၀၀၅ သင်္ကြန်ပွဲတုန်းက မြင်ဖူးသလိုပဲနော်။ အမှတ်မှားတာလားတော့ မသိ။ ဒါပေမယ့် သေချာပေါက် အမှတ်မမှားတာကတော့ `ဘိုင့် ဘိုင်´ လို့ ပြောသွားတဲ့ ကောင်မလေးကိုပဲ။ 🙂
Comment by ကလိုစေးထူး November 26, 2007 @ 12:51 pm
It is better to say “Bye Bye” than “See you”. Perhaps I hope the police won’t call us this time. Ha ha!
Comment by Ko Paw November 27, 2007 @ 3:57 am
ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စင်္ကာရောက်မျိုးချစ်မြန်မာတွေကို လေးစားပါတယ်။
Comment by ဂုလု November 27, 2007 @ 8:26 am
My dear Lin Lett
peace to you and all from our country;
Comment by May November 28, 2007 @ 6:32 pm